Maxaad Ka Taqaanaa Dhulka Lagu Magacaabo "Jannada Adduunka" Ee Dhexda Ugu Jira Saddex Waddan Oo Haysta Hubka Nukliyeerka, - Waadinews | Somali News and Entertainments
Waxaa lagu tilmaamaa ” Jannadii Adduunka” iyada oo ay ugu wacantay quruxda iyo nimcada uu Allah ku mannaystay. Waxa ay ka tirsantahay boqcad ay ku nool yihiin 20% ka mid ah bulshada caalamka. Waa meel horseedday dhawr dagaal oo dhexmaray Hindiya iyo Pakistan tan iyo 1947. Waxaa ay dhuxaysaa saddex waddan oo ku hubaysan nukliyeer.
Kashmir waxay ku taallaa dhul istiraatiiji ah, waayo waxay xad la wadaagtaa 4 waddan oo kala ah; Hindiya, Pakistan, Afghanistan iyo Shiinaha. Badkeeda guud waa 86 Kun oo Mayl oo laba jibaaran. Boqolkiiba 48 waxaa xukuma Hindiya, 35% waxaa xukuma Pakistan, halka uu Shiinuhuna ka xukumo 17%. Guud ahaa dadka ku dhaqan Kashmir waxaa lagu qiyaasaa ilaa 13 Milyan oo boqolkiiba 90 Muslimiin yihiin.
Kashmir waxay ka koobtan tahay saddex gobol oo kala ah 1-Jammu iyo Kashmir, waxaana xukuma Hindiya waana gobolka ugu ballaadhan. 2-Gobolka Khamirta xorta ah waxaana xukuma Pakistan, 3-Aksai Chin oo hoostaga waddanka Shiinaha. Dadka ku dhaqani Kashmir waxa ay ku hadlaan afaf badan sida Hindiga Urduuga iyo afka Shiinaha.
Asal ahaan dadka ku dhaqan Kashmir waa Turki, Afganistaaniyiin iyo Mangooliyiin. Gobolka Kashmir waxaa ka soo burqada saddex webi oo halbawle u ah beeraha Pakistan, sidaa awgeed Pakistan waxay aaminsantahay haddii Hindiya ay qabsato Kashmir in ay taasi khatar gelinayso nolosheeda.
Balse Hindiya ayaa Kashmir u aragta khad difaac oo ay kaga hortagto Pakistan iyo Shiinaha, waxayna aamisan tahay in haddii ay Kashmir madax-bannaani siiso ay taaso ku noqonayso tusbax dabo-furmay oo horseeda in gobolada Hindiya ay ku firkiraan gooni-u-goosi. Kashmir waa gobol ku caan baxay xasilooni darro iyo xiisado siyaasadeed, gaar ahaan xurgufta u dhaxaysay Buudiyiinta iyo Baraahimada.
Qarnigii 14aad isbeddel wayn ayaa ka dhacay Kashmir oo waxaa Islaamay ninkii xukumi jiray oo Buudhist ahaa waxaan la islaamay dad badan oo Kashimiriyiin ah, muddo shan qarni gudahood ah ayuu Islaamku si xawli ah ugu faafay Kishmir ilaa ay isu rogtay gobol Muslim ah. Markii uu Ingiriisku madax-bannaanida siinayey jasiirad la moodda Hindiya waxa uu u qaybiyey laba dawladood oo kala ah Hindiya iyo Pakistan.
Haddaba go’aankii qaybinta Hindiya iyo Paskitan ayaa dhigayey in gobolada ay Muslimiintu ku badan yihiin ay Pakistan raacaan, kuwa ay Hinduusku ku badan yihiinna ay Hindiya ka mid noqdaan iyada oo la tixgelinayo rabitaanka dadka ku dhaqan.
Go’aankan si fiican ayuu uga hirgalay guud ahaan gobolada qaarad la moodda Hindiya marka laga soo reebo saddexda gobol ee Hyderabad, Junagad iyo Kashmir. Gobolka Junagad oo ay Hidnduusku u badnaayey ayuu xaakinkiisii oo Muslim ahaa waxa uu ku daray Pakistan, balse ciidamada Hindiya ayaa xoog ku galay oo ka hirgeliyey afti aakhirkii keentay in Hindiya lagu daro, Gobolka Hyderabad waxaa ku dhacday isla arrintan oo kale.
Laakiin Gobolka Kashmir ayuu xaakinkii ka talin jiray oo Hinduus ahaa waxa uu go’aansaday in lagu daro Hindiya isaga oo iska dhego-tiray rabitaanka aqlabiyaddii Muslimiinta ahayd ee ku dhaqanayd. Go’aankaas ayaa horseeday in uu dagaal dhexmaro dadka Kashmir iyo ciidanka Hindiya sannadkii 1947 iyada Hindiya qabstay saddex meelood meel gobolka Kashmir. Sannadkii 1948 ayey Qaramada Midoobay soo saartay qaraar xabbad-joojineed oo dhigayay in gobolka laga qaado afti.
Haddana sannadkii 1965 ayuu mar kale dagaal dhexmaray labada dhinac balse guulo lagama gaadhin. Dagaal dhexmaray Hindiya iyo Pakistan sannadkii 1971 ayaa horseeday in Bangledesh ay ka go’do Pakistan . Sannadkii 1998 waxaa cirka isku shareertay xiisadda u dhaxaysa labada waddan kaddib markii ay labaduba tijaabiyeen gantaalo nukliyeer ah. ilaa iyo maanta waxaa Hindiya iyo Pakistan ka dhextaagan xiisad colaadeed oo salka ku haysa gobolka Kashmir.